भेरीको छालबाट पानी बोक्दै रविन भन्छन् ः कहिले आउछ कुदुमा चुनावको पानी ? – Nepalpostkhabar
भेरीको छालबाट पानी बोक्दै रविन भन्छन् ः कहिले आउछ कुदुमा चुनावको पानी ?
Hemant KC । ३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०७:५७ मा प्रकाशित
जाजरकोट – घर आँगनमै मौसम अनुसारको वैस निकाल्ने भेरी नदी एक नासले बगेको छ । कहिले गाउँ भरीको निन्द्रा विथोल्ने गरी भेरीको सुसावट सुनिन्छ , कहिले शान्त रुपमा बग्ने भेरी नदीले कुदुवासीको तिर्खा भने अहिले सम्म मेट्न सकेको छैन ।
जाजरकोट सदरमुकामको मुटुमै मात्र होइन, रुकुम पश्चिम जाने मूलबाटो रुपमा रहेको भेरी नगरपालिका –१३ कुदु , छिन्चु –जाजरकोट हुँदै डोल्पा जाने मुख्य सडकले औगटेको भूभाग पनि हो । मध्यपहाडी लाकमार्गले समेत कुदुलाइ अँगालो हालेर जगतीपुर हुँदै दैलेख जोड्ने गरी काम जारी छ । सडकको हर्वको रुपमा स्थापित भएपनि खानेपानीको अभावमा यहाँका सर्वसाधारणको पीडा देखी सक्नु छैन । कुदुमा जिल्ला भरीलाइ पुग्ने समथर भूभाग भएपनि सिँचाइको अभावमा सदुपयोग नहुँदा जिल्लावासीले बाहिरबाट टनका टन खाद्यान्न आपूर्ती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
प्रत्येक दिन भेरी नदीको किनारमा धमिलो पानी ल्याएर परिवारको तिर्खा मेटाउदै आएकी काली विक पानीका दुख हेरेर दिक्क भइसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ , “ स्वास्थ्य , सडक भएर के गर्ने फोहोर पानी पिउँदा हप्तामा एक पटक आफन्त विरामी हुन्छन् , जानी , जानी फोहोर पानी पिउनै पर्ने बाध्यता छ । वर्षायाम भन्दा हिउँदमा भेरी नदीको पानी सफा हुँने गर्दछ , त्यतिबेला सजिलो हुँने गर्दछ । ” आँखाले सम्लो देखिने पानीलाई सफा भनेर पिउँदै आएका जाजरकोट कुदुका सार्वसाधारणहरु पानीका लागि धेरै ठाउँमा गुहार मागेपनि खास परिणाम आउने खालको व्यवस्थापन कत्तैबाट नहुँदा कुरा मात्र कति सुनाउनु भन्दै दिक्क लागेको कुदुका रविन विकले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो , “ भेरीमै हामीले पानी भरेर लिएको तपाइहरुले देख्नुभएको छ , फोटो खिचेर लिनुहोस र नेताहरुलाई जसरी नि देखाउनुहोला ” यो भन्दै गर्दा रविनको अनुहारमा केही आशा र आक्रोष व्यक्त भएको देख्न सकिथ्यो । अझै पनि भेरी नदी सुकेको छैन , केही व्यवस्थापन छिटो गरे अर्को पिडीले दुख नभोगोस यही हाम्रो चाहना छ उहाँले थप्नुभयो । गाउँमा एउटा कुवा रहेको छ । सो कुवामा विहान देखि राती अवेर सम्म पानी लिने सर्वसाधारणको ठुलो लस्कर लागेको हुन्छ । सोही कुवा नजिकै सडक भएकाले गाडीवालाहरु कुवामा पानी भर्न आएका मानिसहरुको भीड देख्दा मेला छ की भनेर कयौँन पटक गाडी रोकेर हेर्ने गरेको समेत स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
यही वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नेताहरु केन्द्रीय राजनीतिमा अव्वल नै रहेको भएपनि आफ्नो माग पुरा नहुँदा नमिठो लागेको सर्वसाधारणको गूनासो रहेको छ । कुदुमा पानीको समस्या नौलो नभएको स्थानीयवासीहरु पीडा सुनाउँछन् । जुन दिन देखि बस्ती यहाँ बस्यो , सोही दिन देखि पानीको कुरा उठ्यो तर सवै पुस्ताको माग पानीको आपूर्ती भएपनि माग सुनुवाइ कहिले पनि भएन कुदुका शेरबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । भेरी नगरपालिकाको ५० लाख लगानीमा निर्माण भएको बोरिङ मेसिनबाट पानी निकाल्ने काम अहिले १ घण्टा पनि सञ्चालन हुन नसकेको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । विद्युत आपूर्ती भएमा मात्र सो पानी सञ्चालनमा आउने गर्दछ ।
एक घण्टा मात्र आउने पानीले कुदुका सर्वसाधारणलाइ छेउ , टुप्पो केही नपुग्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । झण्डै दुइ सय भन्दा बढी घरभुरी रहेको कुदुमा यो पानी हातीमा मुखमा जिरा भएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
सिँचाइ भए जिल्लाभरीलाई खाद्यान्न आपूर्ती हुने
भेरी नगरपालिका १३ कुदुमा जिल्लाको सवै भन्दा ठुलो खेतीयोग्य फाँट भएपनि आकाशे पानीको भरमा यहाँका कृषकहरु खेतीबाली लगाउदा हैरान हुँदै आएका छन् ।
पिउने पानी नपाउँने ठाउँमा सिँचाइ पुग्नु त अर्को आश्चर्य हुँने सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । सयौँ बिघा जमिन आकाशबाट पानी आए खेती हुने पीडाका बीचमा स्थानीयवासीहरु पछिको आशामा बाँचेको बताउँछन् । भेरी नदीबाट पानी निकालेर सिँचाइ सुविधा दिन सकेको भए जिल्लाभरीलाइ खाद्यान्न आपूर्ती गर्न सकिने कृषकहरु समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावल बताउनुहुन्छ । नजिक पानीका मुहान नहुँनु र नजिक रहेको भेरी नदीको सदुपयोग नहुँदा समस्याका थुर्पो दैनिक बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
पानी भएको भए खेत बनाएर धान फलाउने योजना बनाएका कुदुबासीहरु पानीको अभावमा पाखे धान लगाएर वर्षाको पानीबाट जमिन बाँझो राख्नबाट जोगाएको बताउँदै आएका छन् । यत्ता भेरी नगरपवालिकाले ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले विस्तृत योजनाको खोजीमा रहेको बताएको छ । चुनावी नारा समेत हुँदै आएको कुदुको फाँट अझै कहिले सम्म यो नारामा बिक्छ , हेर्न बाँकी रहेको छ ।